TV kachasị elu
Ngwa di nma nke na-enye gi ohere ilele ihe ohuru ohuru na TV n'enweghi nde ego?
Na Ultimate TV ugbu a maka ire ere n'ụwa nile, nke a bụ ihe ngwọta dị mma ile ihe nkiri vidiyo kachasị amasị gị na n'efu!
Anyị niile maara otú ụgwọ ego na ọrụ ndenye aha ga-esi bụrụ mkparị.
Ị na-akwụ ụgwọ maka eriri, Netflix, ihe nkiri na egwuregwu na achọ ... ọ na-agbakwụnye.
Na n'ezie e nwere ihe niile a ngwaike. Onye natara gị, AppleTV ma ọ bụ Firesticks, DVD Player na ọnụ ọgụgụ Smart TV.
Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ihe dị ọnụ ala karịa, ihe ngwọta dị mfe iji belata ego ịgba chaa chaa ma kpochapụ ngwaike niile.
Obi dị m ụtọ na enwere ihe ngwọta iji lelee ihe ọ bụla maka iwu n'efu!
Otu ụlọ ọrụ mmalite mmalite nke United States abịawo na ngwa ngwa ọhụrụ na nke na-adịghị akwụ ụgwọ nke na-agbanwe ụzọ ndị mmadụ si eji usoro mgbasa ozi eme ihe.
igbe onyonyo kachasị elu
A na-akpọ ya Ultimate TV . Ọ bụ ụlọ ihe nkiri Ụlọ ihe nkiri nke nwere ike ijikọ ngwa ngwa na TV ọbụla. Ọ na-abịa na ihe ọ bụla ejirila ma na-agba ma na-agba ọsọ n'ime nkeji. Enweghi ike ịmara na ọ dị mkpa.
Ọ bụ ebe ntụrụndụ nile na-enye gị ohere iwepu ihe ngwongwo ndị ọzọ niile na ihe ndị ọzọ. Ngwa niile anyị maara na-etinyeworị dịka ị nwere ike ịma ya na ngwaahịa dịka AppleTV, Amazon Firestick wdg. Ma enwere ọdịiche dị ukwuu - ọ na-enye gị ohere ile ihe ọ bụla maka n'efu. Enweghị ndebanye aha na iwu zuru oke.
Kedu ka O si arụ?
Ọ dị mfe! Jikọọ TV kachasị na TV ọ bụla i nwere. A na-etinye eriri niile n'ime ngwugwu. Pịa bọtịnụ ike ma mee. O nweghị ihe dị mkpa, ọ na-ewe 10 sekọnd na ị nwere ike ile ihe ọ bụla ịchọrọ.
TV kachasị na-emegharị ya ma degharịa ya ka o wee dị mfe. Igwe ihe omimi Ultimate TV na-enyocha internet ebe ọ ga-achọta na iyi, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ngosi telivishọn ọ bụla, ihe nkiri hollywood, ma ọ bụ ihe omume egwuregwu na-amasị gị na-enweghị nchegbu banyere ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ ma ọ bụ ndebanye aha ọnwa.
"Ngwa a echekwala m ego!"
Ịnwere ike ị na-ege ntị n'egwuregwu telivishọn dị ndụ 24/7 gụnyere ihe niile ị na-enweta site na ụlọ ọrụ kọntaktị mpaghara gị na ọtụtụ narị mmadụ si n'akụkụ ụwa nile. Ihe niile Ultra HD N'ezie.
Ihe na-adịrị ka ọ dị mma ịbụ eziokwu bụ eziokwu, enweghị ụdọ e tinyere. N'ezie ị chọrọ ịntanetị na nke ahụ bụ ego ole na ole n'ọnwa. Ma i nweghi ya? Banyere oge ị na-ebu ibu ma na-echekwa. TV kachasị elu na-emegharị ọsọ ọsọ na ntanetị ịntanetị ya mere ụdị ọdịnaya ọ bụla nwere ike na-ele ozugbo. Ọ bụrụ na Youtube arụ ọrụ Ultimate TV ga-arụ ọrụ kwa.
Na Ultimate TV ị ga-enweta obi iru ala, ịmara na ị nwere ike ile ihe ngosi kachasị amasị gị.
Ma ọ bụ iwu?
EE! N'ezie. Ọ bụ iwu zuru oke iji mee ka ị naghị echekwa ọdịnaya dị na-asọba. Nke ahụ bụ nnukwu ihe banyere ya.
Ndị ụlọ ọrụ USB anaghị enwe obi ụtọ na ọnọdụ ahụ ka ha na-agbalị ịkwụsị TV kachasị elu site n'ịre ya n'ihu ọha. Ya mere, ọ nwere ike nweta iwu-azụ n'oge na-adịghị anya, ma ozugbo i nwere otu, ị dị mma ma nwee ike ile ihe niile maka n'efu ruo mgbe ebighị ebi - kpamkpam iwu.
Ego ole ka ọ na-aga iji nweta m?
I nwere ike iche na ngwaọrụ a dị oke ọnụ ... Ụgha! Ultimate TV na-agba ọsọ a ịzụta 1 nweta 1 FREE na-enye! Oge ịkwụ ụgwọ - enweghị ndenye aha, ọ gaghị akwụ ụgwọ kwa ọnwa. Lelee ya!
Ebee ka m nwere ike ịzụta otu?
Ị nwere ike ịzụta ya ozugbo site na ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ ahụ site na ịpị ebe a .
IHE: Dịka ọ dị elu, ndị mmadụ na-azụta ọtụtụ ngwaọrụ n'otu oge ka ha chọrọ resell ha na ọkwa dị elu n'ọdịnihu. Biko mee ka izu 1-2 maka mbupu.
A pụrụ iji TV kachasị elu mee ihe na mba ọ bụla nke ụwa.
Malite ile ihe ọ bụla maka n'efu ...
Ugbua na a gwala gị banyere ihe ọhụrụ a, ka m gosi gị otú ọ dị mfe ịtọlite. Ihe niile ị ga - eme bụ ịgbaso usoro 3 a:
Nzọụkwụ 1: Ụdị TV kachasị elu taa iji nweta uru nke 40%.
Nzọụkwụ 2: Mgbe ị nwetara ya, mepee ngwugwu ahụ ma jikọọ ya na TV ọ bụla ịchọrọ na eriri gụnyere ma pịa bọtịnụ ike. TV kachasị na-ajụ maka igodo wi-fi gị. Tinye ya na ị dị njikere ịga.
Nzọụkwụ nke 3: Lelee ihe ọ bụla maka n'efu ... Ultimate TV ga-egosi gị na ị nwere ngọngọ ma ọ bụ ihe ngosi na-ewu ewu, ma ị nwere ike ịchọ ihe ọ bụla ma lelee ya ozugbo.
ngwaọrụ kachasị mma iji dochie igwe
Nke a bụ okwu: Ultimate TV bụ nnukwu onyinye n'ihi na ọ ga-azọpụta onye ọ bụla, onye natara ya, ụtụ ego!
Dị ka ọtụtụ ndị na-azụta ọtụtụ ngwaọrụ n'otu oge ka ha wee nwetaghachi-iwu! Biko biko hapụ izu abụọ maka mbupu. "